HFE Fiarovan-tena tsara ho an'ny birao elektronika China Manufacturer
Description:Rafitra fitarihana tsara ho an'ny fiaramanidina,Fanadiovana ny birao elektronika,Fanadiovana ny birao foibe
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Birao Elektronika > HFE Fiarovan-tena tsara ho an&#39;ny birao elektronika
HFE Fiarovan-tena tsara ho an'ny birao elektronika
Famerenana ny vahaolana amin'ny alàlan'ny fiforonan'ny elektronika
Ity vokatra ity dia fitambaran'ny Hydrofluoroether. Ny vahaolana amin'ny fikojakojana ny Electronic Circuit Board dia vokatra iray ahafahana mifandray amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy manimba, ary mitoka-monina. Ny fanadiovana ny birao elektronika dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra azo ampiasaina, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / solosaina samihafa, semiconductor, LCD ary sarety havanana sns., ary azo ampiasaina koa mba handotoana sy handotoana, ny fanodikodinam-peo elektronika na ny fitsilam-pahavoazana amin'ny rivotra, ary ny solvent.
Ny toetra mampiavaka ny Hydrofluoroether:
5. Ny dokam-barotra ho an'ny orinasa dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy manelingelina;
7.The Industrial Coatings ranon-javatra taorian'ny fanadiovana dia azo amboarina amin'ny alalan'ny distilling hoe: Izao no hampihena fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
High Coatings High Performance Physicochemical Parameters:
Fikojakojana fonosana, fitehirizana ary fitaterana:
Ity kapaoty momba ny simia ity dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifam-pandanjana, mora voatahiry ary
Rafitra fitarihana tsara ho an'ny fiaramanidina Fanadiovana ny birao elektronika Fanadiovana ny birao foibe